အပူလြှပျ၍ သတိလဈ မမြေ့ောခွငျး Heat Stroke – Youth Bar
Health Knowledge • ကနျြးမာရေး
အပူလြှပျ၍ သတိလဈ မမြေ့ောခွငျး Heat Stroke
အပူခြိနျလှနျကဲပွီး ရုတျတရကျ သတိလဈမမြေ့ောခွငျး၊ အသကျသဆေုံးခွငျးမြားကို နှဈစဉျပူပွငျး သော နှရောသီရောကျတိုငျး ကွားသိနရေသညျ။
ယခုနှဈတှငျလညျး အပူခြိနျ ၄၀ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျအထိ မွငျ့တကျနသေညျကို သတိပွုကွရနျ မိုးလဝေသ ပညာရှငျမြားက အသိပေးလြှကျရှိသညျ။ ထိုကွားမှာပငျ ရုတျတရကျ သဆေုံးခွငျးသတငျးမြား ဖတျရှုနရေသညျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဧပွီ ၂၂ ရကျ၊ ၂၀၁၉ နထေု့တျ7Day Daily သတငျးစာ မကျြနှာဖုံးတှငျ YBS ယာဉျ ပျေါတှငျ အဖိုးအိုတဈဦး ရုတျတရကျကှယျလှနျ၊ နပေူထဲဖွတျလာပွီး လအေေး ပေးစကျအောကျ ခကျြခွငျး ဝငျ၍ဖွဈဟု တာဝနျရှိသူတို့သုံးသပျ ဟူသော သတငျးကို ဖတျရှုရသညျ။
သတိပွု ဖှယျဖွဈသညျ။ နှဈစဉျ အပူလှနျကဲသညျ့ ရာသီရောကျတိုငျး လူသဆေုံးမှု သတငျးမြား ဖတျရှုရမွဲဖွဈသညျ။ သတိပွုဆငျခွငျနိုငျရနျ သတိပေးတငျပွလိုပါသညျ။
ထိုသတငျးအပွညျ့အစုံမှာ … ရနျကုနျမွို့ ဒဂုံဆိပျကမျးမွို့နယျရှိ ယုဇနဥယြာဉျအိမျယာနှငျ့ အောငျ မင်ျဂလာအဝေးပွေးကားဝငျးသို့ ပွေးဆှဲသညျ့ ပွေးဆှဲသညျ့ YBS အမှတျ(၂) ယာဉျတဈစီးပျေါတှငျ လိုကျပါ လာသညျ့ အသကျ(၈၀) ကြျောအရှယျ အမြိုးသားတဈဦး သေးဆုံးမှု ယမနျနေ့ (၂၁. ၄. ၂၀၁၉) နံနကျက ဖွဈပှားခဲ့သညျ။
သဆေုံးသူအမြိုးသားသညျ အသကျ(၈၂)နှဈရှိ ဒဂုံအရှပေို့ငျးမွို့နယျနေ ဦးမောငျမောငျတငျ ဆိုသူဖွဈပွီး ၎င်းငျး၏ လကျကိုငျဖုနျးမှတဈဆငျ့ မိသားစုဝငျမြားကို ဆကျသှယျအကွောငျးရာမှ သဆေုံးသူ သညျ ကနျြးမာရေးမကောငျးသူ ဖွဈသညျကိုသိရ
ကွောငျး ရနျကုနျမွို့ပွ အမြားပွညျသူသယျယူပို့ဆောငျ ရေးကုမ်ပဏီ ဒုတိယအထှထှေမေနျနဂြောက ပွောသညျ။ “ကနျြးမာရေးမကောငျးတဲ့ကွားက အပူရှိနျမွငျ့ တကျလာတာလညျး တဈကွောငျးပါတယျ။
ဒီလိုအပူရှိနျကွောငျ့ ရုတျတရကျ လအေေးပေးစကျအောကျ ရောကျသှားတော့ ရှော့ချဖွဈသှားတယျလို့ ထငျပါတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။ ဖွဈပုံမှာ ဧပွီ ၂၁ ရကျ နံနကျ ၉ နာရီက အောငျမင်ျဂလာအဝေးပွေးကားဝငျးမှ ယုဇနဥယြာဉျအိမျ
ယာသို့ သှားရာလမျးတှငျ ထိုအဖိုး အို အိပျပြျောရငျး လိုကျပါလာသညျကို တှရှေိ့၍ ခရီးသညျတဈဦးက နှိုးကွညျ့ရာ မရသဖွငျ့ ယာဉျမောငျးထံ အကွောငျးကွားခဲ့သညျ။ ယငျးနောကျ တောငျဒဂုံ မွို့မရဲစခနျးသို့ အကွောငျးကွားပွီး မိသားစုဝငျမြားနှငျ့ ဆကျသှယျအသိပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဤအဖွဈအပကျြနှငျ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ အခွားအဖွဈအပကျြတဈခုမှာ လှနျခဲ့သော နှဈအနညျးငယျကနပေူရှိနျပွငျးသော မလေဆနျး တဈရကျတှငျပုဂံညောငျဦးသို့သှားသောကမ်ဘာလှညျ့ ခရီးသှား Tourist မြား တငျဆောငျထားသညျ့ အဲယားကှနျးဘတျဈကားကွီးတဈစီးသညျ ပုဂံအာနန်ဒာပွတိုကျရှတှေ့ငျရပျပွီး ခရီး သညျမြား
ဆငျးကွရာတှငျ အသကျ ၇၀ ကြျော Tourist ကွီးတဈဦးမှာ အပူလြှပျပွီး ရုတျတရကျ လဲကသြှား သညျ။ သူသညျ ရသေနျ့ဘူးအအေးတဈဘူးကို မော့သောကျရငျး လဲကသြှားသညျဟုလညျး ပွောကွသညျ။ ထိုနရောတှငျပငျ သတိလဈပွီး နောကျပိုငျး အသကျဆုံးရှုံးသှားသညျဟု သိရသညျ။
အပူရှိနျမွငျ့တကျလာခွငျးကွောငျ့ ခရီးသှားလာသူမြား သတိနှငျ့သှားလာရနျနှငျ့ အပူဒဏျကွိုတငျ ကာကှယျရေး လုပျဆောငျရနျ ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနက တိုကျတှနျးထားသညျ။
အထူးသဖွငျ့ အသကျ အရှယျကွီးရငျ့သူမြားနှငျ့ ကနျြးမာရေးမကောငျးသူမြား နလေ့ယျအပူရှိနျမွငျ့တကျခြိနျတှငျ အပွငျသို့မထှကျ ရနျ အထူးရဂရုပွုသငျ့ကွောငျး သတိပေးထားသညျ။
“အသကျအရှယျ ကွီးရငျ့သူမြား နပေူထဲကလာပွီး ကားစီးမယျ.. အဲဒီအခါ လအေေးပေးစကျ ကွောငျ့ ရုတျတရကျအပူလြှပျသှားတာမြိုး ဖွဈရာကနေ အခုလို သတိမသေ့ဆေုံးတဲ့ အထိ ဖွဈကုနျတာပါ။
အကောငျးဆုံးကတော့ အသကျကွီးတဲ့သူတှကေို တဈယောကျထဲ အပွငျမလှတျသငျ့ဘူး။ အဖျောတဈ ယောကျတော့ ပါရမယျ။ အပွငျမထှကျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ရကေို ဆာတာထကျ ပိုသောကျရမယျ” ဟု ကနျြးမာရေးဌာနမှ ဆရာဝနျတဈဦးက ပွောသညျ။
အဓိက အနဖွေငျ့ အပူဒဏျကာကှယျရနျ (လူကွီးမြား) နအေိမျအတှငျးရှိ အေးမွသညျ့ နရောတှငျ နထေိုငျသငျ့ပွီး နပေူသညျ့ အခြိနျ နံနကျ ၁၀ နာရီမှ နလေ့ယျ ၃ နာရီအတှငျး အပွငျမထှကျသငျ့ကွောငျး သတိပေးထားသညျ။
အပူဒဏျကွောငျ့ မူးလဲသှားခွငျး၊ ခန်ဓာကိုယျပငျပနျးနှမျးနယျသှားခွငျး၊ အပွငျးဖြား ခွငျး၊ အပူကွောငျ့ကွှကျတကျခွငျး၊ အပူလြှပျပွီးနောကျ အဖြား ၁၀၆ ဒီဂရီအထိ တကျမယျဆိုရငျ သတိလဈ ပွီး ဦနှောကျထိခိုကျနိုငျသညျ။ အရေးပျေါကုသမှုမြား အခြိနျမီလုပျပေးနိုငျမှ အသကျမဆုံးမညျ ဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ တနျခူး၊ ကဆုနျ၊ နယုနျ (မတျ၊ ဧပွီ၊ မေ) ၃ လသညျ အပူဆုံးလမြားဖွဈသညျ။ နပေူထဲထှကျရသူမြား သတိပွုရမညျ့လဖွဈသညျ။ သင်ျကွနျကသြညျ့လတှငျ အပူဆုံးဖွဈသညျ။ တဈခါတဈရံ မိုးရှာသညျ။ မိုးရှာသျောလညျး ပူမွဲပငျဖွဈနတေတျသဖွငျ့ သတိပွုသငျ့သညျ။
အရပျချေါ အပူလြှပျခွငျးဆိုသညျမှာ ပွငျးထနျသောအပူဒဏျ (နပေူဒဏျ)နှငျ့ထိတှပွေီ့း အရပွေားမှ တဈဆငျ့ ခန်ဓာကိုယျသှေးကွောမြား အတှငျးသို့ အပူဓာတျလှနျကဲစှာ ရောကျသှားပွီးဖြားလာခွငျး၊
ထို့ နောကျ ဦးနှောကျသှေးကွောပေါကျကာ သတိလဈခွငျး၊ ဦးနှောကျအတှငျး သှေးယိုစိမျ့မှုကွောငျ့ လဖွေတျ ပွီး ခန်ဓာကိုယျတဈခွမျး(သို့မဟုတျ) တဈစိတျတဈဒသေ မလှုပျရှားနိုငျတော့ခွငျး၊ စကားပီသအောငျမပွော နိုငျခွငျး (သို့မဟုတျ) လုံးဝစကားမပွောနိုငျတော့ခွငျး ဖွဈရပျမြား ဆကျတိုကျဆိုသလို ဖွဈပှားခွငျးကိုချေါ သညျ။
အပူဒဏျကွောငျ့ လဖွေတျခွငျး (၂) မြိုး
(က) နပေူထဲမှ ပွနျလာပွီး အအေးထဲသို့ ဝငျရောကျခွငျး၊ ရအေေးသောကျခွငျး၊ ရခြေိုးခွငျးမြား ပွုလုပျမိခွငျး။(ဥပမာ- အဲယားကှနျး ဖှငျ့ထားသောအခနျး၊ ယာဉျရထား၊ ကုနျတိုကျကွီး မြားအတှငျး သို့ ဝငျရောကျခွငျး)
(ခ) အအေးခနျးအတှငျး နထေိုငျရာမှရုတျတရကျ ပူပွငျးသောနရေောငျအောကျသို့ ထှကျခွငျး။ (ဥပမာ- အဲယားကှနျးကားစီးပွီး ဆငျးလိုကျသောအခါ ပူပွငျးသောနရေောငျခွညျနှငျ့ တိုကျရိုကျထိ တှခွေ့ငျး)
အပူအအေး ဝိရောဓိဖွဈခွငျးဟုချေါသော ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈခွငျးကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျး သှေးစီး ကွောငျးမြားတှငျ သှေးကွောမြားရုတျခွညျး ပွောငျးလဲမှုဒဏျကို မခံနိုငျတော့ဘဲ သှေးကွောကွီးမြား အကျ ကှဲခွငျး၊ သှေးကွောငယျလေးမြား ပွတျထှကျခွငျးဖွဈနိုငျပသေညျ။
အသကျကွီးသူမြားတှငျ ပို၍ဖွဈရခွငျးမှာ သူတို့၏ သှေးကွောမြားမှာ ဟောငျးနှမျးပွီး မာဆတျမှုကွောငျ့ ပူ၍ ကယျြခွငျး၊ အေး၍ ကြုံ့ခွငျးဒဏျကို မခံ နိုငျခွငျးဖွဈသညျ။ ပလတျစတဈပိုကျမြား ဟောငျးနှမျးသောအခါ မာကြှတျဆတျပွီး ကှဲလှယျပေါကျလှယျ သညျ့ သဘောပငျဖွဈသညျ။
Heat Stroke မဖွဈစရေနျ ကာကှယျရမညျ့ နညျးလမျးမြား
(က) နပေူပွငျးခြိနျတှငျ အပွငျမထှကျပါနှငျ့ မလှဲမရှောငျသာ၍ ထှကျရလြှငျ လုံခွုံသောအဆောငျး၊ အကာ၊ ထီး၊ ဦးထုပျပါဖို့ လိုသညျ။
(ခ) စောငျ့ဆိုငျးရသော အလုပျဖွဈလြှငျ သဈပငျအရိပျ၊ အဆောကျအအုံအရိပျ၊ အမိုးအကာအောကျမှ စောငျ့ပါ။
(ဂ) ရငေတျလြှငျ ရိုးရိုးရသေောကျပါ။ ရခေဲရမေသောကျပါနှငျ့။
(ဃ) အဲယားကှနျးကားစီးပွီး လိုရာရောကျ၍ နပေူရှိနျပွငျးသော နရောတှငျ ဆငျးရမညျဆိုလြှငျ မဆငျးမီက ကွို တငျ၍ ရသေောကျထားပါ။ အစာအိမျအတှငျးရရှေိလြှငျ သှေးကွောမြားက ရကေို စုပျယူထားသဖွငျ့ တျောရုံ အပူဒဏျကို ခံနိုငျသညျ။
(င) နပေူထဲမှ ပွနျလာပွီးလြှငျ ရခေဲရေ (လုံးဝ) မသောကျပါနှငျ့၊ ရမေခြိုးပါနှငျ့၊ မကျြနှာမသဈပါနှငျ့။
(စ) ရနှေေးကွမျးတှငျ ဆားလှျောအနညျးငယျ ခပျသောကျခွငျးသညျ ရှေးလူကွီးမြား၏ အပူဒဏျကာကှယျ နညျး ဖွဈပါသညျ။
ယခုနှဈ နှရောသီအပူရှိနျလှနျကဲမညျဟု မိုးလဝေသပညာရှငျမြားက သတိပေးလကျြရှိသညျ။ အထူး သဖွငျ့ အထကျအညာဒသေ
နထေိုငျသူမြားအတှကျ ပို၍သတိရှိရနျလိုသညျ။ မွို့နလေူတနျးစားမြား အ တှကျ ထီး၊ ဦးထုပျ၊ နကောမကျြမှနျ စသညျတို့ဖွငျ့ အပူဒဏျကာကှယျဖို့ သတိပေးနခြေိနျတှငျ လယျထဲ ကိုငျးထဲအလုပျလုပျကွရသော တောသူတောငျသူမြားအား မညျသို့ကာကှယျပေးမညျနညျး။
စိတျပူပနျရနျမ လိုပါ။ ရှဘေိုးစဉျဘောငျဆကျကပငျ တောသူတောငျသားတို့တှငျ နပေူဒဏျ ကာကှယျနညျးရှိပါသညျ။ အကာအကှယျရှိပါသညျ။ ထိုအကာအကှယျမှာ သနပျခါးဘဲကွား ထူထူလိမျးခွငျးနှငျ့ ဝါးခမောကျ တို့ဖွဈ သညျ။
မွနျမာ့ရိုးရာသနပျခါးသညျ မကျြနှာနှငျ့လကျ၊ ခွမြေားပါလိမျးထားလြှငျ နပေူဒဏျ (ခတျေအချေါ ခရမျးလှနျရောငျခွညျဒဏျ) သာမက လတေိုကျပွီး အသားပပျခွငျး၊ ဖုနျမှုနျ့မြားကပျခွငျးကိုပါ ကာကှယျ သညျ။
သနပျခါးအမွဈတှငျ အအေးဓာတျ(သီတဓာတျ)ပါသဖွငျ့ အပူကနျပွီး မိတျဖုမြားထှကျခွငျးကိုပါ အကာအကှယျပေးသညျ။ ရှေးက လူကွီးမြားသညျ ကလေးမြားကို ရမေိုးခြိုးပွီးသညျနှငျ့ ကြောကျပဉျြတှငျ သနပျခါးသှေးပွီး လိမျးပေးသညျ။
လိမျးပေးရုံသာမက သနျ့ရှငျးသောရဖွေငျ့ သှေးထားသော သနပျခါးအ နညျးငယျကို ကလေး၏ ပါးစပျအတှငျးသို့ ခှံ့ပေးသညျ။ ကလေးငယျမြားသညျ စ၍ ခှံ့ပေးခါစက သနပျခါး သညျ ခါးသကျသကျအရသာရှိသဖွငျ့ မကွိုကျသျောလညျး နောငျတှငျကွိုကျသှားလရှေိ့သညျ။
သနပျခါးစား ခွငျးသညျ အပူဒဏျကာကှယျသညျ့အပွငျ ကလေးငယျမြားကို ရကြေောကျနှငျ့ ဝကျသကျပေါကျခွငျးမှလညျး အကာအကှယျပေးနိုငျသညျ။
ကနျစှနျးရှကျသညျ ရာသီမရှေးရနိုငျသော အစာဖွဈသညျ။ နှအေခါ ကုနျးကနျစှနျး၊ မိုးအခါ ရကေနျ စှနျး စသညျဖွငျ့ ပေါပေါမြားမြားရနိုငျသညျ။ ကနျစှနျးရှကျကို နစေ့ဉျစားခွငျးဖွငျ့ အပူဒဏျမှကာကှယျနိုငျ သညျ။
ကနျစှနျးရှကျသညျ အဆုတျအားကောငျးစသေညျ့ အာပေါစာဖွဈသညျ။ နှရောသီအပူငုပျ၍ ခြောငျး ခွောကျဆိုးခွငျး၊ အသံဝငျခွငျးကို သကျသာစနေိုငျသညျ။ ကနျစှနျးရှကျကို မနျကညျြးမှညျ့နှငျ့ ခဉျြရညျဟငျး ခကျြစားလြှငျ အပူဒဏျကာကှယျသော ရာသီစာဖွဈသညျ။
မိတျကိုကျပွီး ပူစပျပူလောငျဖွဈလြှငျ ကနျစှနျး ရှကျ အရညျညှဈပွီး အားအနညျးငယျထညျ့၍ ဖြျောလိမျးပေးလြှငျ သကျသာစနေိုငျသညျ။
Heat Stroke မဖွဈစရေနျ သတိပွုရမညျ့ အခကျြမြား
၁။ သနပျခါးလိမျးပါ။ မွနျမာ့ရိုးရာ သနပျခါးသညျ အပူဒဏျကိုကာကှယျသညျ။
၂။ မိတျထှကျလြှငျ သနပျခါးအနညျးငယျစားပေးပါ။ ခရပှေငျ့ခွောကျနှငျ့ သနပျခါးရောသှေးလိမျးပါ။
၃။ ရတေဈခှကျသောကျပွီးမှ အပွငျထှကျပါ။
၄။ အပွငျမှ ပွနျလာလြှငျ ရခေဲရမေသောကျပါနှငျ့။ ပုံမှနျသဘာဝရအေေးကိုသာ သောကျပါ။
၅။ ခွထေောကျရမေဆေးပါနှငျ့။ ရမေစိမျပါနှငျ့။
၆။ မကျြနှာမသဈပါနှငျ့။ ရအေေးဖတျဖွငျ့ မကပျပါနှငျ့။
၇။ နပေူထဲမှ ပွနျလာလြှငျ ခကျြခငျြး ရမေခြိုးပါနှငျ့။
၈။ ဦးခေါငျး၊ ဆံပငျဖွနျ့၍ ပနျကာလမေခံပါနှငျ့။
၉။ ရခေဲသတ်ေတာထဲမှ ရဘေူးကို သောကျလိုလြှငျ အပွငျမှာ (၁၅)မိနဈခနျ့ ထုတျထားပွီးမှ သောကျပါ။
၁၀။ ပူပွငျးသောရာသီတှငျ ဝမျးခြုပျလြှငျ ညအိပျယာဝငျ မနျကညျြးမညျ့နှငျ့ ထနျးလကျြဖြျောရညျသောကျပါ။ ဝမျးနုတျဆေးအပွငျးမြား မသောကျပါနှငျ့။
၁၁။ ဦးခေါငျးတုံးလြှငျ (ခေါငျးရိတျလြှငျ) နံနကျစောစော ရိတျပါ။ နလေ့ယျ၊ ညနေ မရိတျပါနှငျ့။
၁၂။ ဝမျးပကျြလြှငျ သကွားသုံးဇှနျး၊ ဆားတဈဇှနျး၊ လကျဖကျခွောကျလကျတဈဆုပျ သံဒယျအိုးဖွငျ့ လှျော ပွီး ရနှေေးဆူဆူတှငျ ခတျသောကျပါ။ ဝမျးအရညျသှားခွငျးကို ရပျစပေါသညျ။
အပူလျှပ်၍ သတိလစ် မေ့မျောခြင်း Heat Stroke
အပူချိန်လွန်ကဲပြီး ရုတ်တရက် သတိလစ်မေ့မျောခြင်း၊ အသက်သေဆုံးခြင်းများကို နှစ်စဉ်ပူပြင်း သော နွေရာသီရောက်တိုင်း ကြားသိနေရသည်။
ယခုနှစ်တွင်လည်း အပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ မြင့်တက်နေသည်ကို သတိပြုကြရန် မိုးလေဝသ ပညာရှင်များက အသိပေးလျှက်ရှိသည်။ ထိုကြားမှာပင် ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်းသတင်းများ ဖတ်ရှုနေရသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ နေ့ထုတ်7Day Daily သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွင် YBS ယာဉ် ပေါ်တွင် အဖိုးအိုတစ်ဦး ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်၊ နေပူထဲဖြတ်လာပြီး လေအေး ပေးစက်အောက် ချက်ခြင်း ဝင်၍ဖြစ်ဟု တာဝန်ရှိသူတို့သုံးသပ် ဟူသော သတင်းကို ဖတ်ရှုရသည်။ သတိပြု ဖွယ်ဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ် အပူလွန်ကဲသည့် ရာသီရောက်တိုင်း လူသေဆုံးမှု သတင်းများ ဖတ်ရှုရမြဲဖြစ်သည်။ သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ရန် သတိပေးတင်ပြလိုပါသည်။
ထိုသတင်းအပြည့်အစုံမှာ … ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ယုဇနဥယျာဉ်အိမ်ယာနှင့် အောင် မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်းသို့ ပြေးဆွဲသည့် ပြေးဆွဲသည့် YBS အမှတ်(၂) ယာဉ်တစ်စီးပေါ်တွင် လိုက်ပါ လာသည့် အသက်(၈၀) ကျော်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေးဆုံးမှု ယမန်နေ့ (၂၁. ၄. ၂၀၁၉)နံနက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သေဆုံးသူအမျိုးသားသည် အသက်(၈၂)နှစ်ရှိ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်နေ ဦးမောင်မောင်တင် ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ လက်ကိုင်ဖုန်းမှတစ်ဆင့် မိသားစုဝင်များကို ဆက်သွယ်အကြောင်းရာမှ သေဆုံးသူ သည် ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ ဖြ
စ်သည်ကိုသိရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ပြ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင် ရေးကုမ္ပဏီ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာက ပြောသည်။ “ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ကြားက အပူရှိန်မြင့် တက်လာတာလည်း တစ်ကြောင်းပါတယ်။
ဒီလိုအပူရှိန်ကြောင့် ရုတ်တရက် လေအေးပေးစက်အောက် ရောက်သွားတော့ ရှော့ခ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဖြစ်ပုံမှာ ဧပြီ ၂၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီက အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်းမှ ယုဇနဥယျာဉ်အိမ်ယာသို့ သွားရာလမ်းတွင် ထိုအဖိုး အို အိပ်ပျော်ရင်း လိုက်ပါလာသည်ကို တွေ့ရှိ၍ ခရီးသည်တစ်ဦးက နှိုးကြည့်ရာ မရသဖြင့် ယာဉ်မောင်းထံ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် တောင်ဒဂုံ မြို့မရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားပြီး မိသားစုဝင်များနှင့် ဆက်သွယ်အသိပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဤအဖြစ်အပျက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အခြားအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က နေပူရှိန်ပြင်းသော မေလဆန်း တစ်ရက်တွင် ပုဂံညောင်ဦးသို့ သွားသော ကမ္ဘာလှည့်
ခရီးသွား Tourist များ တင်ဆောင်ထားသည့် အဲယားကွန်းဘတ်စ်ကားကြီးတစ်စီးသည် ပုဂံအာနန္ဒာပြတိုက်ရှေ့တွင်ရပ်ပြီး ခရီး သည်များ ဆင်းကြရာတွင် အသက် ၇၀ ကျော် Tourist ကြီးတစ်ဦးမှာ အပူလျှပ်ပြီး ရုတ်တရက် လဲကျသွား သည်။
သူသည် ရေသန့်ဘူးအအေးတစ်ဘူးကို မော့သောက်ရင်း လဲကျသွားသည်ဟုလည်း ပြောကြသည်။ ထိုနေရာတွင်ပင် သတိလစ်ပြီး နောက်ပိုင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားသည်ဟု သိရသည်။
အပူရှိန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ခရီးသွားလာသူများ သတိနှင့်သွားလာရန်နှင့် အပူဒဏ်ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက တိုက်တွန်းထားသည်။
အထူးသဖြင့် အသက် အရွယ်ကြီးရင့်သူများနှင့် ကျန်းမာရေးမကောင်းသူများ နေ့လယ်အပူရှိန်မြင့်တက်ချိန်တွင် အပြင်သို့မထွက် ရန် အထူးရဂရုပြုသင့်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
“အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူများ နေပူထဲကလာပြီး ကားစီးမယ်.. အဲဒီအခါ လေအေးပေးစက် ကြောင့် ရုတ်တရက်အပူလျှပ်သွားတာမျိုး ဖြစ်ရာကနေ အခုလို သတိမေ့သေဆုံးတဲ့ အထိ ဖြစ်ကုန်တာပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကို တစ်ယောက်ထဲ အပြင်မလွှတ်သင့်ဘူး။ အဖော်တစ် ယောက်တော့ ပါရမယ်။ အပြင်မထွက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ရေကို ဆာတာထက် ပိုသောက်ရမယ်” ဟု ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောသည်။
အဓိက အနေဖြင့် အပူဒဏ်ကာကွယ်ရန် (လူကြီးများ) နေအိမ်အတွင်းရှိ အေးမြသည့် နေရာတွင် နေထိုင်သင့်ပြီး နေပူသည့် အချိန် နံနက် ၁၀ နာရီမှ နေ့လယ် ၃ နာရီအတွင်း အပြင်မထွက်သင့်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
အပူဒဏ်ကြောင့် မူးလဲသွားခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သွားခြင်း၊ အပြင်းဖျား ခြင်း၊ အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း၊ အပူလျှပ်ပြီးနောက် အဖျား ၁၀၆ ဒီဂရီအထိ တက်မယ်ဆိုရင် သတိလစ် ပြီး ဦနှောက်ထိခိုက်နိုင်သည်။ အရေးပေါ်ကုသမှုများ အချိန်မီလုပ်ပေးနိုင်မှ အသက်မဆုံးမည် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် (မတ်၊ ဧပြီ၊ မေ) ၃ လသည် အပူဆုံးလများဖြစ်သည်။ နေပူထဲထွက်ရသူများ သတိပြုရမည့်လဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်ကျသည့်လတွင် အပူဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိုးရွာသည်။ မိုးရွာသော်လည်း ပူမြဲပင်ဖြစ်နေတတ်သဖြင့် သတိပြုသင့်သည်။
အရပ်ခေါ် အပူလျှပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပြင်းထန်သောအပူဒဏ် (နေပူဒဏ်)နှင့်ထိတွေ့ပြီး အရေပြားမှ တစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်သွေးကြောများ အတွင်းသို့ အပူဓာတ်လွန်ကဲစွာ ရောက်သွားပြီးဖျားလာခြင်း၊ ထို့ နောက် ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ကာ သတိလစ်ခြင်း၊
ဦးနှောက်အတွင်း သွေးယိုစိမ့်မှုကြောင့် လေဖြတ် ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခြမ်း(သို့မဟုတ်) တစ်စိတ်တစ်ဒေသ မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ခြင်း၊ စကားပီသအောင်မပြော နိုင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လုံးဝစကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း ဖြစ်ရပ်များ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်ပွားခြင်းကိုခေါ် သည်။
အပူဒဏ်ကြောင့် လေဖြတ်ခြင်း (၂) မျိုး
(က) နေပူထဲမှ ပြန်လာပြီး အအေးထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ရေအေးသောက်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းများ ပြုလုပ်မိခြင်း။(ဥပမာ- အဲယားကွန်း ဖွင့်ထားသောအခန်း၊ ယာဉ်ရထား၊ ကုန်တိုက်ကြီး များအတွင်း သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း)
(ခ) အအေးခန်းအတွင်း နေထိုင်ရာမှရုတ်တရက် ပူပြင်းသောနေရောင်အောက်သို့ ထွက်ခြင်း။ (ဥပမာ- အဲယားကွန်းကားစီးပြီး ဆင်းလိုက်သောအခါ ပူပြင်းသောနေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိ တွေ့ခြင်း)
အပူအအေး ဝိရောဓိဖြစ်ခြင်းဟုခေါ်သော ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးစီး ကြောင်းများတွင် သွေးကြောများရုတ်ခြည်း ပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဘဲ သွေးကြောကြီးများ အက် ကွဲခြင်း၊ သွေးကြောငယ်လေးများ ပြတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
အသက်ကြီးသူများတွင် ပို၍ဖြစ်ရခြင်းမှာ သူတို့၏ သွေးကြောများမှာ ဟောင်းနွမ်းပြီး မာဆတ်မှုကြောင့် ပူ၍ ကျယ်ခြင်း၊ အေး၍ ကျုံ့ခြင်းဒဏ်ကို မခံ နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပလတ်စတစ်ပိုက်များ ဟောင်းနွမ်းသောအခါ မာကျွတ်ဆတ်ပြီး ကွဲလွယ်ပေါက်လွယ် သည့် သဘောပင်ဖြစ်သည်။
Heat Stroke မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ရမည့် နည်းလမ်းများ
(က) နေပူပြင်းချိန်တွင် အပြင်မထွက်ပါနှင့် မလွဲမရှောင်သာ၍ ထွက်ရလျှင် လုံခြုံသောအဆောင်း၊ အကာ၊ ထီး၊ ဦးထုပ်ပါဖို့ လိုသည်။
(ဃ) အဲယားကွန်းကားစီးပြီး လိုရာရောက်၍ နေပူရှိန်ပြင်းသော နေရာတွင် ဆင်းရမည်ဆိုလျှင် မဆင်းမီက ကြို တင်၍ ရေသောက်ထားပါ။ အစာအိမ်အတွင်းရေရှိလျှင် သွေးကြောများက ရေကို စုပ်ယူထားသဖြင့် တော်ရုံ အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်သည်။
ယခုနှစ် နွေရာသီအပူရှိန်လွန်ကဲမည်ဟု မိုးလေဝသပညာရှင်များက သတိပေးလျက်ရှိသည်။ အထူး သဖြင့် အထက်အညာဒေသ နေထိုင်သူများအတွက် ပို၍သတိရှိရန်လိုသည်။
မြို့နေလူတန်းစားများ အ တွက် ထီး၊ ဦးထုပ်၊ နေကာမျက်မှန် စသည်တို့ဖြင့် အပူဒဏ်ကာကွယ်ဖို့ သတိပေးနေချိန်တွင် လယ်ထဲ ကိုင်းထဲအလုပ်လုပ်ကြရသော တောသူတောင်သူများအား မည်သို့ကာကွယ်ပေးမည်နည်း။ စိတ်ပူပန်ရန်မ လိုပါ။
ရှေဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကပင် တောသူတောင်သားတို့တွင် နေပူဒဏ် ကာကွယ်နည်းရှိပါသည်။ အကာအကွယ်ရှိပါသည်။ ထိုအကာအကွယ်မှာ သနပ်ခါးဘဲကြား ထူထူလိမ်းခြင်းနှင့် ဝါးခမောက် တို့ဖြစ် သည်။
မြန်မာ့ရိုးရာသနပ်ခါးသည် မျက်နှာနှင့်လက်၊ ခြေများပါလိမ်းထားလျှင် နေပူဒဏ် (ခေတ်အခေါ် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်) သာမက လေတိုက်ပြီး အသားပပ်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များကပ်ခြင်းကိုပါ ကာကွယ် သည်။
သနပ်ခါးအမြစ်တွင် အအေးဓာတ်(သီတဓာတ်)ပါသဖြင့် အပူကန်ပြီး မိတ်ဖုများထွက်ခြင်းကိုပါ အကာအကွယ်ပေးသည်။ ရှေးက လူကြီးများသည် ကလေးများကို ရေမိုးချိုးပြီးသည်နှင့် ကျောက်ပျဉ်တွင် သနပ်ခါးသွေးပြီး လိမ်းပေးသည်။
လိမ်းပေးရုံသာမက သန့်ရှင်းသောရေဖြင့် သွေးထားသော သနပ်ခါးအ နည်းငယ်ကို ကလေး၏ ပါးစပ်အတွင်းသို့ ခွံ့ပေးသည်။ ကလေးငယ်များသည် စ၍ ခွံ့ပေးခါစက သနပ်ခါး သည် ခါးသက်သက်အရသာရှိသဖြင့် မကြိုက်သော်လည်း နောင်တွင်ကြိုက်သွားလေ့ရှိသည်။
သနပ်ခါးစား ခြင်းသည် အပူဒဏ်ကာကွယ်သည့်အပြင် ကလေးငယ်များကို ရေကျောက်နှင့် ဝက်သက်ပေါက်ခြင်းမှလည်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။
ကန်စွန်းရွက်သည် ရာသီမရွေးရနိုင်သော အစာဖြစ်သည်။ နွေအခါ ကုန်းကန်စွန်း၊ မိုးအခါ ရေကန် စွန်း စသည်ဖြင့် ပေါပေါများများရနိုင်သည်။ ကန်စွန်းရွက်ကို နေ့စဉ်စားခြင်းဖြင့် အပူဒဏ်မှကာကွယ်နိုင် သည်။
ကန်စွန်းရွက်သည် အဆုတ်အားကောင်းစေသည့် အာပေါစာဖြစ်သည်။ နွေရာသီအပူငုပ်၍ ချောင်း ခြောက်ဆိုးခြင်း၊ အသံဝင်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်သည်။
ကန်စွန်းရွက်ကို မန်ကျည်းမှည့်နှင့် ချဉ်ရည်ဟင်း ချက်စားလျှင် အပူဒဏ်ကာကွယ်သော ရာသီစာဖြစ်သည်။ မိတ်ကိုက်ပြီး ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်လျှင် ကန်စွန်း ရွက် အရည်ညှစ်ပြီး အားအနည်းငယ်ထည့်၍ ဖျော်လိမ်းပေးလျှင် သက်သာစေနိုင်သည်။
Heat Stroke မဖြစ်စေရန် သတိပြုရမည့် အချက်များ
၁၁။ ဦးခေါင်းတုံးလျှင် (ခေါင်းရိတ်လျှင်) နံနက်စောစော ရိတ်ပါ။ နေ့လယ်၊ ညနေ မရိတ်ပါနှင့်။
၁၂။ ဝမ်းပျက်လျှင် သကြားသုံးဇွန်း၊ ဆားတစ်ဇွန်း၊ လက်ဖက်ခြောက်လက်တစ်ဆုပ် သံဒယ်အိုးဖြင့် လှော် ပြီး ရေနွေးဆူဆူတွင် ခတ်သောက်ပါ။ ဝမ်းအရည်သွားခြင်းကို ရပ်စေပါသည်။
လူတှေ စားနကွေတဲ့ ဆေးဘဲဥ ထဲက ကွောကျမကျဖှယျ အဆိပျအတောကျ
အသကျကွီးလို့ ဗိုကျကွီးပူလာခွငျးကို ဖွရှေငျးပေးမယျ့...